သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း(Bacterial vaginosis BV) ဆိုသည်မှာ သားအိမ်လမ်းကြောင်းအတွင်းတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ အများအပြားပေါက်ဖွားရာမှ ဖြစ်လာသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ရောဂါလက္ခဏာမှာ မိန်းမကိုယ်မှ ငါးညှီနံ့ကဲ့သို့အနံ့ရှိသော အရည်အချွဲများဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အချွဲများမှာ အဖြူရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်ရှိသည်။ ဆီးသွားသည့်အခါ ပူလောင်ခြင်းကို ခံစားရတတ်သည်။ သို့သော် ယားယံခြင်းဖြစ်လေ့မရှိပါ။ တခါတရံတွင်လည်း ရောဂါလက္ခဏာပြလေ့မရှိပါ။ ဤရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် အိတ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးနှင့် ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါကဲ့သို့သော လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆခန့်ပိုများလာသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ဤရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် ရက်မစေ့ခင် မီးဖွားနိုင်သည်။
သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းသည် သားအိမ်လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများထဲမှ အရေအတွက်အများဆုံး ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးမှာ အဆပေါင်း ရာခန့်၊ ထောင်ခန့်ပိုမိုများပြားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါပိုးမှာ လက်တိုဘက်စလိုင် (Lactobacilli) ဟုခေါ်သောပိုးဖြစ်သည်။ သားအိမ်လမ်းကြောင်းဆေးခြင်း ၊ လိင်ဆက်ဆံဖော် အသစ် သို့မဟုတ် အများအပြားရှိခြင်း၊ ပဋိဇီဝဆေးနှင့် သားအိမ်အတွင်းတွင် ပစ္စည်းထည့်၍ ကိုယ်ဝန်တားခြင်း (intrauterine device IUD) တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ဤရောဂါမှာ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါမဟုတ်ပါ။ မိန်းမကိုယ်မှထွက်သော အရည်အချွဲများကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရာတွင် ပီအိတ်ချ်(pH)မြင့်မားနေပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးများ အများအပြားတွေ့ရှိပါက ဤရောဂါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းကို တစေးပိုး(yeast)နှင့် ထရိုင်ခိုမိုနပ်စ်ပိုး(Trichomonas)တို့ ကူးစက်ခံရခြင်းနှင့် မှားနိုင်သည်။
သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ကလင်ဒါမိုင်စင်(clindamycin) သို့မဟုတ် မက်ထရိုနိုင်ဒဇော(metronidazole)စသော ပဋိဇီဝဆေးတို့ဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ ဤဆေးများကို ကိုယ်ဝန်သည်များတွင်လည်း ကိုယ်ဝန်လေးလမှစတင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ တချို့လူများတွင် ဆေးကုသမှုခံယူပြီးသော်လည်း ပြန်လည်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးပါသောဆေး(Probiotics) ကို သောက်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။ အကျိုးပြုအဏုဇီဝပိုးပါသောဆေးနှင့် ပဋိဇီဝဆေးတို့သောက်သုံးခြင်းကြောင့် မီးဖွားပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားမှုရှိ၊မရှိကို သေချာစွာမသိသေးပါ။
သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်သောအရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးများအားလုံးတွင် အဖြစ်အများဆုံး သားအိမ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးပေါင်း (၅)မှ(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရသည်။ ဤရောဂါသည် အာဖရိကတိုက်တွင် အဖြစ်များပြီး အာရှနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့မရှိပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အသက်(၁၄)နှစ်မှ (၄၉)နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးပေါင်း (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရသည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်နှုန်းမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုးစုများပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပထမဆုံး သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင် ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို (၁၈၉၄)ခုနှစ်တွင် စတင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
↑ Clark, Natalie (2014). "Microbiota and Pelvic Inflammatory Disease". Seminars in Reproductive Medicine 32 (01): 043–049. doi:10.1055/s-0033-1361822. ISSN 1526-8004. PMID 24390920.
↑ What are the symptoms of bacterial vaginosis? (2013-05-21)။3March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kenyon, C (December 2013). "The global epidemiology of bacterial vaginosis:asystematic review.". American Journal of Obstetrics and Gynecology 209 (6): 505–23. doi:10.1016/j.ajog.2013.05.006. PMID 23659989.
↑ Bradshaw, CS (July 2015). "Making inroads into improving treatment of bacterial vaginosis - striving for long-term cure". BMC Infectious Diseases 15: 292. doi:10.1186/s12879-015-1027-4. PMID 26219949.
↑ Queena၊ John T. . (2012)။ Queenan's management of high-risk pregnancy : an evidence-based approach (6th ed.)။ Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell။ p. 262။ ISBN 9780470655764။
↑ What are the treatments for bacterial vaginosis (BV)?။ National Institute of Child Health and Human Development (2013-07-15)။4March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bennett၊ John (2015)။ Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases။ Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders။ ISBN 9781455748013။
↑ Nardis, C. (September–October 2013). "Vaginal microbiota and viral sexually transmitted diseases". Annali di Igiene 25 (5): 443–56. doi:10.7416/ai.2013.1946. PMID 24048183.
↑ Bacterial Vaginosis – CDC Fact Sheet။ Centers for Disease Control and Prevention (March 11, 2014)။2Mar 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mashburn, J (2006). "Etiology, diagnosis, and management of vaginitis.". Journal of midwifery & women's health 51 (6): 423–30. doi:10.1016/j.jmwh.2006.07.005. PMID 17081932.
↑ Donders, GG (April 2014). "Treatment of bacterial vaginosis: what we have and what we miss.". Expert opinion on pharmacotherapy 15 (5): 645–57. doi:10.1517/14656566.2014.881800. PMID 24579850.
↑ Othman, M (24 January 2007). "Probiotics for preventing preterm labour.". The Cochrane database of systematic reviews (1): CD005941. doi:10.1002/14651858.CD005941.pub2. PMID 17253567.
↑ Bacterial Vaginosis (BV): Condition Information။ National Institute of Child Health and Human Development (2013-05-21)။3March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bacterial Vaginosis (BV) Statistics Prevalence (September 14, 2010)။3March 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သားအိမ်လမ်းကြောင်းတွင်_ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း&oldid=716355" မှ ရယူရန်
လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ